अष्ट्रेलियामा नश्लभेदी व्यवहार, अपत्यारिलो तर नमिठो यथार्थ | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
फागुन १, २०७५ बुधबार २०:३७:४६ | साेहम सुबेदी
अष्ट्रेलिया - सन् २०१८ अक्टोबर अन्तिम साता एउटा घमाइलो दिन। भिक्टोरिया राज्यको क्रेगिबर्नबाट मेलबर्न सिटी जाने रेलको डिब्बा यात्रुले भरिभराउ छ । कार्यालय समय जागिरेहरु सुटमा, विद्यार्थीहरु ड्रेसमा र अरु साधारण पाेशाकमा छन् ।
युवतीहरु आफ्नै सुरमा मेकअप मिलाउँदै छन् । उभिएका र बसेका अधिकांशले कानमा हेडफोन घुसारेका छन् । निहुरिएर आफ्नै मोवाइल हेरिरहेका छन् । केही पाका मान्छे किताबमा घोप्टिएका छन् । लाग्छ त्यहाँ कसैलाई कसैको वास्ता छैन ! यस्तैमा एक अधबैंशे गोरी महिला अँग्रेजीमा गालीका शब्द वर्षाउँदै चिच्याउन थालिन्...“ह्वाट द फ... यु आर इन दिस सिट ?
रेलमा आमनेसामने ३–३ जना बस्ने सिटमा एकतर्फ रैथाने मूलकी आमा र अर्कोतर्फ मोटो जिउकी छोरी बसेका थिए । तीन जनाको सिटमा दुई जना बराबरको ठाउँ ओगटेर छोरी बसेकी थिइन् । सिटको बाँकी ठाउँमा छोरीको मसिनो हाते ब्याग थियो । हतारहतार रेल चढेकी श्याम वर्णकी दक्षिण एसियाली केटी हातेब्याग सारेर आफ्नी छोरीसँगै बसेको ती रैथाने “गोरी” आमालाई पटक्कै मन परेन । त्यसपछि भिडियो खिचेर तँलाई डिपोर्ट गराईदिन्छु भन्नेसम्मको दुर्व्यवहार गरिन् ।
एसियाली नश्लको गहुँगोरो वर्णको भएकै आधारमा सार्वजनिक यातायातमा सबैका अघिल्तिर हेपिनुपरेको एउटा प्रतिनिधि घटना हो यो । त्यसबाहेक पनि काम वा अवसरहरुमा रैथाने र आप्रवासीका लागि दुईथरी व्यवहार देख्न पाईन्छ ।
भर्खर अष्ट्रेलिया आएको व्यक्तिले पहिला आफू यहाँको समुदाय सुहाउँदो कथित “सभ्य” हुन कोशिस गर्छ । जस्तोसुकै व्यवहार होस् पहिला स्थायी बसोबासको अनुमति पीआर पाईयोस् भन्ने चाहना राख्छ । अष्ट्रेलियाको नागरिक भैसकेपछि दुर्व्यवहारको विरुद्धमा तत्कालै आवाज उठाउन सक्ने हुन्छन् ।
कानुनी उपचार खोज्ने हिम्मत पलाउँछ । तर त्यति हुँदासम्म व्यक्ति अष्ट्रेलियाको रहनसहनमा पुरै भिजिसकेको हुन्छ ।